Asan'i Petera - Wikipedia
Ny Asan'i Petera na Asan'i Piera dia soratra apokrifa kristiana tranainy tamin'ny taonjato faha-2 na tamin'ny fiantombohan'ny taonjato faha-3.
Azo zaraina roa ny boky: ny fizarana voalohany mitantara zavatra niseho tao Jerosalema fa ny faharoa kosa miresaka zavatra niseho tao Roma. Ny "Fiangonana Lehibe" dia manao an'io boky io ho apokrifa tamin'ny taonjato faha-6 sy faha-8. Ireo Kristiana tany aloha dia mihevitra fa i Leokiosy Karinosy izay lazain'i Epifanio avy any Salamina mpiara-dia amin'ny apostoly Joany no nanoratra azy.
Io no boky voalohany izay milaza fa maty nohomboana tamin'ny hazo fijaliana ny apostoly Petera na Piera sady ahitana ny lahatenin'i Petera izay manazava ny antony nangatahany ny hanaovana ny lohany ambany rehefa homboina izy.
Famintinana ny bokyModifier
Araka io boky io i Petera dia nanao fahagagana ka isan'izany ny fananganany ho velona trondro natsatsika tamin'ny setroka sy ny fampitenenany alika. Ny soratra sasany (ao amin'ny Berlin Codex) dia ahitana fitantarana momba ny vehivavy izay misafidy ny ho kilemaina malemy toy izay hanao firaisana ara-nofo; amin'ny soratra sasany dia voalaza fa zanaka vavin'i Petera izany vehivavy izany.
Io boky io dia manameloka an'i Simona Magy (na Simona mpanao hatsarana), izay olona misy ifandraisany amin'ny gnostisisma sady resahina betsaka ao amin'ny boky. Nitory teny i Petera fa manao hatsarana (majika) i Simona mba hanova ireo mpanaraka azy amin'ny alalan'ny fitaka. Nihaika an'i Simona i Petera mba hanaporofo hoe ny asan'iza no avy amin'Andriamanitra ary ny an'iza no fitaka. Voalaza fa nandositra i Simona ka nokapohin'i Petera ho latsaka tamin'ny alalan'ny herin'Andriamanitra nefa nivavaka an'i Simona mba tsy ho faty noho izany fa haratra mafy fotsiny. Rehefa potraka avy any an-danitra i Simona dia folaka tamin'ny faritra telo ny tongony, ary ireo mpanaraka an'i Petera nitora-bato azy avy ao an-tanàna. Manohy mitantara ny Asan'i Petera fa nentina tao Terakina tamin'ny Kastora izy "ary tao izy dia dokotera roa no nanapaka azy tamin-kabibiana ka tapitra teo ny amin'i Simona ilay anjelin'i Satana".
Taorian'izany zavatra niseho izany, i Petera dia saika handositra ny tanàna nefa nahita an'i Jesosy izy ka nandray izany ho hafatra nandidy azy hijanona ao an-tanàna sy hohomboana amin'ny hazo fijaliana mba hahita indray an'i Jesosy any an-danitra. Nangataka ny hohomboana amin'ny hazo fijaliana i Petera ka ny lohany hatao ambany fa ny tongony ho ambony satria aminy dia tsy mendrika ny hovonoina mitovy amin'ny fomba namonoana an'i Jesosy Kristy ny olombelona.
Ireo toko famaranana manoritsoritra ny nanomboana an'i Petera dia voatahiry misaraka ka mitondra ny lohateny hoe "Ny Fanaovana Maritira an'i Petera" ao amin'ny sora-tanana firaketana telo amin'ny teny grika sy amin'ny soratra kopta (ampahany) sy siriaka sy etiopika (gezy) sy arabo sy armeniana ary slavonika (slava). Noho izany dia misy ny mihevitra fa ny fitantarana ny naha maritiora an'i Petera dia soratra taty aoriana sady soratra nisaraka izay nakambana amin'ireo toko voalohany.
Asan'i Joany tao Roma
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Asan%27i_Petera&oldid=975466"
Dernière modification le 8 Oktobra 2019, à 15:18
Voaova farany tamin'ny 8 Oktobra 2019 amin'ny 15:18 ity pejy ity.